programming အကြောင်း (1) — Steemit
programming အကြောင်း (1)
forexlive (34) in myanmar •9months ago
Programming ဆိုတာ ကွန်ပျူတာတစ်လုံးပေါ်မှာ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို အမိန့်ပေးခိုင်းစေနိုင်တဲ့ အရာတွေလို့ အကြမ်းအနေနဲ့ မှတ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ ထိတွေ့နေကြတဲ့ ကွန်ပျူတာဆိုတဲ့ အရာတွေကို ပထမဆုံးလေ့လာကြည့်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ အသုံးပြုနေတဲ့ ကွန်ပျူတာဟာ ထိတွေ့ကိုင်တွယ်နိုင်သောအရာ (Hardware) နဲ့ ထိတွေ့ကိုင်တွယ်လို့ မရနိုင်သောအရာ (Software) တို့နဲ့ ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။
(1). Input Device များ
(2). Output Device များ
ဒီနေရာမှာ သိထားရမှာက Hardware မှာ မှတ်ဉာဏ်ပဲရှိပြီးတော့ အသိဉာဏ်မရှိပါဘူး။ ဒါကြောင့် (Computer has no Intelligence.) လို့ဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ကွန်ပျူတာကြီး အသက်ဝင်လာအောင်၊ အလုပ်တွေလုပ်လို့ရအောင် သူ့မှတ်ဉာဏ်ကို အားကိုးပြီး အသိဉာဏ်နဲ့တူတဲ့ Software တွေကို Run ပေးရပါတယ်။
ဒီ Software တွေကြောင့် ကွန်ပျူတာဟာ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို လုပ်နိုင်တာဖြစ်ပြီး၊ Hardware တွေကို ခိုင်းစေရန်အတွက် Software တွေလိုအပ်လာပါတယ်။
Software ဆိုတဲ့နေရာမှာ အလွယ်ပြောရရင်တော့ Programming ဘာသာစကားတွေနဲ့ ရေးထားတဲ့ အစုအေဝးတစ်ခုကို ဆိုလိုပါတယ်။
ဥပမာအားဖြင့် Adobe Pagemaker, Photoshop, Office, AutoCAD, စသည်ဖြင့် အားလုံးကို Software လို့ခေါ်ဆိုနိုင်ပါတယ်။
အဲ့ဒါတွေ ဖြစ်လာအောင် Programming Languages တွေ နဲ့ရေးကြရပါတယ်။ အဲ့ဒီတော့ Programming ဆိုတာ Software ရေးနည်းလို့ဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Instruction/ Command ဆိုပြီး နှစ်ခုပါတယ်။
5 နဲ့4ပေါင်းတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုကို ဖော်ပြပါမယ်။
အရှင်းလင်းဆုံးပုံစံနဲ့ ပြရမယ်ဆိုရင်5+4လို့ရေးနိုင်ပါတယ်။
အဲ့ဒီနေရာမှာ5နဲ့4က Data ဖြစ်ပြီး (+) က Instruction / Command ဖြစ်ပါတယ်။
Programming Language တွေများစွာ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခြေခံသဘောတရားတွေကတော့ အားလုံးအတူတူပဲလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
Programming Language ကို အခြေခံအားဖြင့်တော့ (၃) မျိုး ခွဲခြားထားပါတယ်။
High-Level Languages တို့ဖြစ်ပါတယ်။
သူ့မှာ “0” ရယ် “1” ရယ်နှစ်ခုပဲ ရှိပါတယ်။ စက်အတွက် ရေးတဲ့စာလို့ နားလည်နိုင်ပါတယ်။ လူတစ်ဦးအနေနဲ့တော့ နားလည်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ စက်တစ်လုံးအပေါ်မှာတော့ အပြည့်အဝနားလည်နိုင်တဲ့ အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
Assembly Languages မှာတော့ လူက 30% လောက်နားလည်လာပြီး စက်ကလည်း 70% လောက် နားလည်လာပါပြီ။
Assembly Languages မှာ Data တွေရှိမယ်၊ Instruction / Command တွေရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဥပမာအနေနဲ့ ထပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ 10 + 20 = 30 ဆိုတာမျိုးပါ။ 10, 20, 30 က Data တွေဖြစ်ပြီး၊ + နဲ့ = က Instruction / Command တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် စက်ကို ဒီအတိုင်းသွားရေးပြမယ်ဆိုရင် သူကမသိနိုင်ပါဘူး။ သူက0နဲ့ 1 နှစ်ခုပဲသိတာ ဖြစ်ပါတယ်။ စက်နားလည်နိုင်ဖို့အတွက် ဘာသာပြန် (Compile) လုပ်ပေးရတယ်။
အဲ့ဒီအခါမှ Machine Language ဖြစ်သွားပြီး စက်မှ Run လို့ရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Compile ဆိုတာ ပြောင်းပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ Assembly Language ကနေ Machine Language ကိုပြောင်းပေးတာကို Compile လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်။ နာမည်အနေနဲ့ Assembler လို့ခေါ်ပါတယ်။
High-Level Languages မှာတော့ လူတွေက 100% ကို နားလည်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်။
စက်ကိုလည်း နားလည်အောင် Compile လုပ်လို့ အဆင်ပြေသွားပြီးလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ High-Level မှာလည်း Data တွေ Instruction / Command တွေနဲ့ ပြည့်စုံပါတယ်။ Program တစ်ခုရေးပြီးလို့ စက်နားလည်အောင် Compile လုပ်ပေးရင် သူ့ကို နာမည်အနေနဲ့ Compiler လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဆက်လက်ဖေါ်ပြပါမည်။
myanmar esteem learn life
Congratulations @forexlive! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :